किन दिए अर्थमन्त्रीले एकाएक राजीनामा ? राष्ट्रपतिलाई लेखे मार्मिक पत्र — Imandarmedia.com
किन दिए अर्थमन्त्रीले एकाएक राजीनामा ? राष्ट्रपतिलाई लेखे मार्मिक पत्र
काठमाडौं। राष्ट्रपतिलाई मार्मिक पत्र लेख्दै अर्थमन्त्रीले एकाएक राजीनामाको घोषणा गरेका छन् । श्रीलंकामा अर्थमन्त्री नियुक्त भएको २४ घण्टा नपुग्दै अली साबरीले राजीनामा दिएका छन्।
राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षलाई पत्र लेख्दै राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् ।श्रीलंकाको अंग्रेजी अनलाइन पोर्टल डेली मिरर श्रीलंकाले जनाएअनुसार उनले आफूले अन्तरिम रुपमा मात्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
उनले यदी राष्ट्रपति राजापाक्षले संसदीय प्रणालीबाहिर गई समस्याको समाधान खोजेको भए आफू सांसद पदबाट समेत राजीनामा दिन तयार रहेको बताएका छन् ।
यसअघि श्रीलंकाका सबै २६ मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । मन्त्रीहरूको राजीनामापछि राष्ट्रपतिले साबरी सहित चार जनालाई हिजोमात्र विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिई शपथ ग्रहण गराएका थिए ।
मन्त्रीहरुको सामूहिक राजीनामापछि राष्ट्रपतिले जारी समस्या समाधान गर्न संसद्मा रहेका सबै दलहरूलाई सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गरेका थिए । यद्यपि विपक्षीले भने राष्ट्रपतिको आग्रह अस्वीकार गरेको जनाइएको छ ।
चरम आर्थिक संकट एवम् अत्यावश्यक वस्तुको अभावका कारण श्रीलंकामा प्रायः नियमितजसो प्रदर्शन हुँदै आएको छ । यसअघि प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति राजापाक्षको घरमै पुगी हिं’सा’त्मक प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनबीच त्यहाँ आपतकाल लगाइएको छ ।
आपतकालका बावजुद प्रदर्शन जारी रहेको बताइएको छ । त्यस्तै श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षेले पार्टीका वरिष्ठ सदस्यहरूलाई आफूले पदबाट राजीनामा नदिने तर बहुमत जुटाउने जुनसुकै पार्टीलाई पनि सरकार हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन् ।
श्रीलंकाबाट प्रकाशित हुने अंग्रेजी अखबार डेली मिररको अनलाइन संस्करणले जनाएअनुसार राष्ट्रपति राजपाक्षेले संसद्‍मा कायम २२५ सिटमध्ये ११३ सिटको बहुमत जुटाउने जुनसुकै पार्टीलाई सरकार हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको जनाएका हुन् ।
गत आइतबार श्रीलंकाको मन्त्रिपरिषद्‍मा रहेका २६ मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा बुझाएका थिए । त्यसमथि मंगलबार सरकारको समर्थन गर्ने ४१ सांसदहरु सत्ताधारी गठबन्धनबाट बाहिरिएर स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा रहने बताएसँगै त्यहाँ राजनीतिक संकट चुलिएको छ ।
आर्थिक संकट तथा अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभावबीच श्रीलंकामा सरकारविरोधी प्रदर्शन तीव्र भएको छ । संकट समाधान गर्न असक्षम रहेको भन्दै विपक्षीहरुले राष्ट्रपति एवम् सरकारको राजीनामा माग गर्दै आएका छन् ।
श्रीलंकाको राजनीतिक र आर्थिक स्थितिमा सुधार भइरहेको छैन। यो देशमा न त काध्यान्न पाइन्छ, न त पेट्रोल पम्पमा इन्धन पाइन्छ । प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेको पूरै मन्त्रिपरिषद्ले राजीनामा बुझाएको छ र त्यहाँको सरकारमा नयाँ अनुहार ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षका अन्य दुई बुहारीले पनि देश छाडेका छन् वा छैनन् भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । श्रीलंकामा धेरै दिनदेखि हल्ला चलिरहेको छ कि प्रधानमन्त्रीको परिवारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू श्रीलंका छोडेर बाहिर जान सक्नेछन्।
विनमल राजपाक्षे श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्षका छोरा हुन् । हालसम्म नमल श्रीलंकाको युवा तथा खेलकुद मन्त्री थिए । तर अहिले श्रीलंकाको पूरै क्याबिनेटले राजीनामा दिएको छ ।
नमल राजापाक्षेले श्रीलंकामा सामाजिक संजाल प्लेटफर्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका थिए। उनले आइतबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भनेका थिए ‘सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध बेकार छ किनकि धेरै व्यक्तिले सामाजिक संजाल चलाउन भिपीएन प्रयोग गरिरहेका छन्।
श्रीलंकाको यो कदमको अन्य देशमा पनि आलोचना भएको थियो । यसपछि सरकारले आइतबार दिउँसोसम्म सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । श्रीलंका कर्जा, महंगीबाट पीडित छ।
विदेशी मुद्रा अभावका कारण श्रीलंकाले विदेशबाट पेट्रोलियमलगायत अत्यावश्यक खाद्यवस्तु आयात गर्न सकेको छैन । श्रीलंका सरकारले स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न धेरै शहरहरूमा कर्फ्यू लगाएको छ।